Marroo: 'Ibidda bor tuqame ka'u osoo hintaane isa dhumaa dhaamsuuf taanaan waliin haasa'uuf qophiidha' - BBC News Afaan Oromoo
BBC News, Afaan OromooQabiyyeetti darbi
Marroo: 'Ibidda bor tuqame ka'u osoo hintaane isa dhumaa dhaamsuuf taanaan waliin haasa'uuf qophiidha'
29 Caamsaa 2019
Haaromsameera 30 Caamsaa 2019
Madda suuraa, MH
Addi Bilisummaa Oromoo kanaan booda humna waraanaa hidhatee socho'u hin qabu jedhan Hayyu Dureen dhaabichaa Obbo Daawud Ibsaa.
Kana kan jedhan kaleessa [Roobii] wayita koreen ABO fi mootummaa gidduutti araara buusuun, miseensota WBO bosona jiran galchuuf hojjetaa ture gabaasa xumuraa dhiyeessetti.
Waltajjii Pireezidantii Itti Aanaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee aanga'oonni fi namooti siyaasaa irratti argaman kanarratti mootummaafi ABO'n waliigaltee xumuraarra gahuun isaaniis himameera.
Gabaasni Koree Araaraa kanaan dhiyaate ABO, mootummaafi ummanni Oromoo wal ta'uun nageenyaa yeroo kamiyyu caalaa barbaachisaa ta'e mirkaneessuufi ol-aantummaa seeraa kabachiisu akka qaban akeeka.
Mootummaafi ABO'n araara buusuuf waliigalan
Koreen Teeknikaa araara mootummaa fi ABO maal irra gahe?
'Boordii filannootti galmaa'uufi filannoo dhufuuf qophaa'aa jirra'
ABO'n hojii mootummaan naannoo Oromiyaa ol-aantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetu ni deggera jedhan Obbo Daawud Ibsaa.
"Nutis gama keenyaan qophaa'oodha. Dhaabotii Oromoos ta'an mootummaa Oromiyaa waliin hojjennee nageenya Oromiyaa qofa osoo hin taane, nageenya naannoo kanaatiifuu bu'uura taanee akka xumura itti goonu amantaa keenya," jedhan Obbo Daawud.
"Marroo, Ajaja WBO zoonii Lixaa"
Ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa kan ta'e Kumsaa Dirribaa ykn Marroon ibsa kan booda yaada BBC'f kenneen 'wanti jijjiirame hin jiru' jedha.
Waraanni biyyattii, qaamni poolisiifi tikaa walaba ta'ee kan uummataaf waamamuufi kan paartii siyaasaa kamiifiyyu ulee hin taanee hanga hin jiraannetti waamicha mootummaa hin fudhannu jedha.
"Nuti qaama waraana paartii siyaasaa tokko deggeree hawwaasa isaa miidhu ta'uu hin feenu, sana keessattis yaamamuus hin feenu."
"Haasaa bu'aa yeroo argatanii gaaffii uummataatti deebii kabeebsaa godhanii, bor ammoo ibidda tuqamee ka'u osoo hin taane ibidda yeroo xumuraaf hin kane dhaamsinee bira darbuu dandeenyu, haasaan akkasii yoo jiraate wal haasa'uudhaaf qophiidha" jedha.
Sana ta'uu baannaan wanti jijjiiramu hin jiraatu jedha.
Waraanni Bilisummaa Oromoo qaama nageenya Oromiyaa ta'ee saba Oromoo nagana bahee, nagana galuun jiraatu arguun yoomiyyu hawwii isaati jedhe.
Osoo mootummaan isin haasofsiisuu barbaadee waraana dhaabdanii galuu feetuu gaaffii jedhuufis deebii kennaniiru.
Mootummaa waliin mariyachuu akka fedhan himanii garuu qaamni sadaffaa badiifi rakkoo nu gidduu jiru ilaalu, akka lolli yeroo dheeraa uummata keessatti deemamaa ture ilaalamee furmaata argachuu danda'u tokkootti walitti dhufamee haasaan yoo jiraate waliin haasa'uuf qophiidha jedhan.
"Haasaa bu'aa yeroo argatanii gaaffii uummataatti deebii kabeebsaa godhanii bor ammoo ibidda tuqamee ka'u osoo hin taane ibidda yeroo xumuraaf hin kane dhaamsinee bira darbuu dandeenyu yoo jiraate wal haasa'uudhaaf qophiidha."
Gaaffii isaa isa sirrii hundeerraa deebii hin arganne. Kanaf gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo deebisuutiin alatti, wanti diinqa keessatti bixxiilamaa bulu, borus, iftaanis, yoomiyyu nagaa buusuu hin danda'u of goyyoomsuu qofaarraa kan hafe jedha ajajaan waraanaa kun.
Gabaasa Koree Araaraa kanarratti dubbii taasisanii Hayyuun Siyaasaafi miseensi koree kanaa Obbo Jawaar Mohaammad, "Guyyaa har'aa irraa kaasee Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)fi mootummaa kan naannoos ta'e kan federaalaa gidduu lolli akka hin jirretti kan hubannu," jedhan.
Itti dabaluun, kan hubatamuu qabus ABOn waraana isa jalatti buluufi ajaju hin qabu jedhu.
Mootummaanis kana beekuudhaan qaamni kun siyaasa nagayaa ta'een akka deemuuf tumsa barbaachisaa ta'e akka taasisuuf, waraanni waamicha uummataa fudhatee gales kunuunsiifi tajaajilli barbaachisaan akka godhamuuf gaafanna jedhan.
"Hojiin keenya asirratti kan xumuramu ta'uus, tokko waraana biyya gala kana bakka qabsiisuu irratti mootummaa waliin waltumsinee kan walgargaarruufi itti deemnu ta'a.
Gara biraatiin akkuma waliigaltee kanaatiin ABO'n waajira isaa banatee, namoonni hidhamanis hiikamanii Orromiyaa keessatti nageenyiifi waltumsuun akka uumamuuf kan hojjennu ta'a."
Madda suuraa, Fuula Feesbuukii Jawaar Mohaamad
Kana irratti dhaabbileen miidiyaa, rogeeyyiin akkuma waggoota darban keessa qabsoo kanaaf bu'aa guddaa buusan, har'as nageenyaafi tasgabbii Oromiyaatiif araarriifi walhubannaan dhaabbilee lamaan gidduutti uumame kun araara waara'aafi tasgabbii dheeraa akka fiduuf shoora guddaa taphatu jennees amanna jedhan Obbo Jawaar.
"Dhaabbilees, uummatas addaan harkisuu osoo hin taane, walitti fiduu irratti ga'ee keessan akka baatan abdii qabna."
Gabaasa Obbo Baqqalaa Garbaa dhiyeessan
Gabaasa Hojii Koree Araraa ammoo Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo dhiyeessan dubbii ijoo aarmaan gadii kana kaasaniiru.
1. Addi Bilisummaa Oromoo waraana bosona keessaa waan hin qabneef, koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eera jennee amanna.
2. ABO'n waraana bosonatti hafe akka hin qabne akka mirkaneessu gaafanna.
3. Akkuma labsii Amboo sanaatti, namoonni sababii waldhabdee kanaatiin shakkamanii mana hidhaa jiran akka gadi lakkifaman gaafanna.
4. Akkaataa labsii Amboofi seera biyyattiitiin ABO'n bakka hundaatti waajira isaa banatee karaa nagaa akka qabsaa'uuf mootummaan tumsa hundumaa akka godhuuf gaafanna.
5. Miseensota ABO duraanii kanneen waamicha Ambbootii Gadaafi uummata Oromoo dhaga'anii galan akkuma Abootti labsametti waanti waadaa galameef akka hojiirra oolu gaafanna.
Miseensonni WBO Xollaayi jiran mormiirra jiru
Mootummaafi ABO'n waraana dhaabuu labsan
Madda suuraa, Getty Images
Ibsa waa'ee suuraa,
Hayyuu duree ABO Daawud Ibsaa
Uummanni keenya waan hudna caalaa kan inni barbaadu nageenya waan ta'eef, qaamonni beekamtii mootummaatiin ala dhidhannaatiin socho'aa jiran kamiyyu gara jireenya nagaatti akka deebiyan waamicha gochaa, mootummaanis warra waamicha kana dhaga'anii dhufan akka simati ni gaafanna.
ABO, paartileen siyaasaa biroofi uummanni Oromii marti waliigalanii, waltumsanii ol-aantummaa seeraa akka kabachiisan dhaamsa dabarsina.
Murtii kanas gamni lachuu maqaa uummata Oromootiin mallattoon akka nuuf mirkaneessuun raawwii isaatiif ciminaafi kutannoodhaan hojjechuudhaaf waadaa akka nuuf galan kabajaan gaafanna.
Obbo Daawud Ibsaa: Har’arraa eegalee itti gaafatamni WBO abbootii gadaa fi ummata Oromoof ta’a
22 Amajjii 2019
Koreen Teeknikaa: 'Garee saddetitti qoodamanii bobba'uun WBO waliin mari'achuuf qophii xumuraa jirra'
30 Amajjii 2019
ABO: ''Boordii filannootti galmaa'uufi filannoo waggaa dhufuuf qophaa'aa jirra''
15 Caamsaa 2019
Araara ABO fi Mootummaa: Miseensonni WBO Xoollayi jiran mormiirra jiru
13 Bitooteessa 2019
Koreen mootummaafi ABO jidduutti araara buusuuf hundaa'e waraana dhaabuu labse
24 Amajjii 2019
Dhaggeeffadhaa, Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Marroo: Gaaffiif Deebii guutuu sagaleen
28 Muddee 2018
Tiraamp hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa ganeeraa?
Sa'aatii 5 dura
Jawaar fi Baqqalaa Garbaa dhimma qabeenya jalaa ugguramee mana murtiitti dubbatan
Sa'aatii 2 dura
Hiriira deeggarsaa irratti boombii darbachuun balleessaa kan jedhaman irratti murtiin dabre
Sa'aatii 4 dura
'Dorsiifni dhimma Hidha Laga Abbayyaarratti taasifaman seera idil-addunyaa kan cabsaniidha'
24 Onkololeessa 2020
Oduu BBC Afaan Oromoo
30 Amajjii 2020
Kaayyoon mormii karaa duula tiwiitaraan 'miliyoona hedduu' qaqqabe maali?
Ajjeechaa Naqamtetti raawwatamerratti waan odeeffanne
Tiraamp "Masriin Hidha Haaromsa Abbayyaa ni rukkutti" jedhan
Komishiniin Araaraafi Nagaa maal hojjataa jiraa?
23 Onkololeessa 2020
Dhiiroonni Jaappaan maaliif haadha warraasaaniirratti basaastuu qacaruu?
Viidiyoo, Dargaggoo weerara awwaannisaa xiyyaara nam-maleessaa hojjechuun falmaa jiru, Turtii 1,23
Poolisiin Bishooftuu Obbo Lidatuun wabiin gadhiifamuu isaanii xalayaan dhiheesse
22 Onkololeessa 2020
Baay'ee kan dubbifame
Erdohaan lammiileen isaanii meeshaalee Firaans akka lagatan dhaaman
Firaans biyyootni Arabaa oomishaalee ishee lagachuun 'sirrii miti' jette
Al-Shabaab mootummaa caalaa gibira guddaa sassaaba jedhame
Heerumni umurii malee maaliif naannoo Amaaraatti heddummate?
Ajjeechaa Luba Pheexiroos Tesfaayee irratti qorannoo eegale jedhe poolisiin
'Beela'uu jechuun maal akka ta'e sirriittan beeka'
BBC News, Afaan Oromoo
BBC News maaliif amanuu dandeessa
© 2020 BBC. Qabiyyeewwan maddawwan alaa irraa ta'aniif BBCn itti gaafatamaa miti. Gara geessituu alaatti akkaataa itti hojjennu dubbisi.